shaqooyinka daryeelka caafimaadka iyo xirfadaha | khayraadka Work ka USAHello | USAHello
sahan reactivation Student
Baro warshadaha caafimaadka iyo kala duwan ee noocyada kala duwan ee shaqooyinka caafimaadka. Read ku saabsan waddooyinka mustaqbalkiisa kala duwan ee aad qaadi karto caafimaadka. Ogow waxa tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilowdo shaqo raadintaada.
Healthcare waa warshadaha bilyan oo dollar ah oo la malaayiin shaqaalaha. Shaqaalaha daryeelka caafimaadka u tababaran yihiin in baahida weyn ee. Soo galootiga iyo qaxootiga leeyihiin fursad wanaagsan oo raadinta shaqada caafimaadka ee isbitaalka sababtoo ah kuwaas oo goobaha shaqada weyn oo inta badan u adeega dadka kala duwan. Hospitals inta badan raadiyo dadka luqadaha badan ku hadla, si aad xirfadaha luqadda waxay noqon doonaan caawimo.
Taas oo shaqada caafimaadka?
Shaqooyinka Healthcare waxay noqon kartaa si fiican u bixisay iyo fulinta. Iyada oo tababarka saxda ah, aad shaqo xasiloon oo leh fursado badan ka heli kartaa si loo horumariyo ee xirfadiisa ciyaareed. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo shaqooyin caafimaadka. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah:
kaaliyaha Nursing - A Kaaliyaha Nursing Ruqsado (CNA) waa qof ka caawisaa kalkaaliso diiwaan-gashan ama liisan leh loo helo calaamado muhiim ah, abaabulka qalab caafimaad, maamulka bad geed isbonji la, iyo in ka badan. Si ay u noqdaan certified, waxaad u baahan doontaa in aad buuxiso tababarka in shahaado. Gobol kasta wuxuu leeyahay xeerar u gaar ah, laakiin waxa sida caadiga ah ku saabsan 75 saacadood oo ah tilmaamaha fasalka iyo tababarka clinical. aad tababarka iyo gudubto imtixaanka ka dib, Dukumentigaas waxaa si aad uga shaqeyso.
Phlebotomist - Phlebotomists dhiig deeqaha sawiri, shubo, imtixaanada, iyo cilmi-baarista. Waa in ay fahmaan sida qalabka sawirka dhiiga shaqeeya. Iyagu ma leeyihiin in ay waqti dheer ku qaataan dugsiga si aad u hesho shahaado a. tababarka Phlebotomy qaadataa 4 in 8 bilood.
kaaliye caafimaad Home - kaaliye caafimaadka guriga A waa mas'uul ka ah caawinta dadka naafada ah, dadka waayeelka ah, ama bukaanka jiran hawlaha maalin-ka-maalin sida qubeysashada, labiska, iyo shaqo guri. caawiye guriga A safri laga yaabaa in inta u dhaxaysa dhowr bukaanka ama la waqti-buuxa ah bukaanka ku nool. Si aad u noqoto shahaado caawiye caafimaadka guriga ah, waa inaad buuxisaa 75 saacadood oo tababar ah, muujiyaan xirfadaha, oo noqotay baaritaan.
kaaliyaha ilkaha - kaaliyeyaasha caafimaadka ilkaha sameeyo waajibaadka maamulka iyo daryeelka bukaanka ee aasaasiga ah ee xafiiska daryeelka ilkaha. Tusaale ahaan, kaaliyaha ilkaha diyaarin bukaan nadiifinta afka ama waxaa dhici karta inuu mas'uul ka ah buuxinta iyo abaabulka diiwaanka bukaanka ee xafiiska. Tababarka meel ka sagaal bilood qaadan kartaa laba sano si ay u dhamaystiraan, ku xiran tahay haddii ay tahay shahaado, diblooma ama digrii. Raadi sida in ay noqoto kaaliyaha ka diiwaan gashan ilkaha.
therapist duugista - therapist massage A waa qofka isticmaala taabashada in ay ku cayaaraan muruqyada jidhka ku. Tani waxay yarayn kartaa xiisad, stress, oo xanuun ah oo kuu ogolaanaya bukaanka si ay u nastaan. Waxaad u baahan tahay ruqsad si ay u noqon therapist massage ah. Ugu yaraan inta saacadood Legal loo helo ruqsad therapy massage a kala duwan ee gobolka, iyo ugu yar, kuwaas oo u dhaxayn 330 in 1,000 saacadood.
dhakhtarka - Dhakhtarka loola jeedaa dhakhtarka. Dhakhaatiirta baadhitaanka iyo dawaynta bukaanka. Qaar badan oo ka shaqeeyaan cusbitaalada, laakiin waxa ay sidoo kale ku shaqeeyaan laga yaabaa in dhaqanka iyaga u gaar ah. Takhaatiirta ku shaqayn karaa taqasusyo badan, oo ay ku jiraan Caruurta, daryeelka qoyska, cudurka kansarka, iyo daryeelka degdegga ah. Si aad u noqoto dhakhtar, ardayda waxa laga rabaa inay dhameeyaan afar sano ee kulliyadda shahaadada afarta sano ee dugsiga caafimaadka raacay by saddex ilaa siddeed sano oo tababar ah degenaanshaha.
macluumaadka caafimaadka farsamo - A farsamo macluumaadka caafimaadka (Hit) hayaa diiwaanka caafimaadka ammaan, sax ah, iyo ilaa taariikhda. Ku dhawaad ​​xogta oo dhan waxaa lagu hayaa on kombiyuutarada. Inta badan dadka ka shaqeeya farsamada macluumaadka caafimaad ee uu haysto shahaado culuunta associate ah ee tiknoolajiyadda macluumaadka caafimaadka ama beer la xiriira. Raadi sida si ay u noqdaan farsamo ah macluumaadka caafimaadka.
daawo- - farsamo Farmashiyaha caawin farmashiistayaasha caawiyo bukaanka. Waa in ay fahmaan magacyada daroogada iyo isticmaalka. techs Farmashiyaha ku gartaan si loo Bixin daawooyinka iyo loo ogaado qiyaasta saxda ah, laakiinse iyagu ma ay qoraan ama go'aannada ku saabsan daawooyinka. farsamo Farmashiyaha u baahan tahay shahaadada. Barnaamijyada Certificate iyo associate degree qaadan kartaa hal ilaa laba sano si ay u dhamaystiraan.
kalkaalisada Registered (RN) - kalkaaliyayaal diiwaangashan is ogow of bukaanada isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka. Waxaad noqon kartaa RN ah by helitaanka shahaadada associate ah ee, shahaadada koowaad ama diblooma barnaamijka isbitaalka. Markaas waa in aad qaadato iyo baaso tijaabada shatiga golaha qaranka. Dugsiyada qaarkood waxay bixiyaan degrees kalkaalinta online.
Radiologic tiknoolajiyadda - farsamoyaqaanno Radiologic qabtaan imtixaanada la isticmaalayo imaging, sida X-rays iyo baaritaano CT. Waxay ka garab dhakhtar shaqeeyaan, laakiinse iyagu ma loo tababaray in la ogaado natiijada imtixaanaadka imaging ay sii adkeeyo. degree An associate si ay u noqdaan farsamo darsaya ah qaadan kartaa ilaa laba sano.
Waa daryeel caafimaad oo shaqada saxda ah ii?
Sida aad kor ku arkay, tababar shaqooyin badan oo daryeel caafimaad oo qaadan kartaa waqti dheer. Inkastoo shaqooyinka caafimaadka faa'iido ah oo inta badan si wanaagsan u-bixinta, xirfadle caafimaad oo inta badan la walaac badan ka qaban, waqtiga, iyo masuuliyada. Waxa muhiim ah in aad ka fikirto waxyaalahan ku saabsan haddii aad doonayso inaad daryeel caafimaad mustaqbalkiisa mudada dheer. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in akhri 6 wax si ay u eegaan ka hor doorashada xirfadda caafimaadka ama qaataan imtixaanka mustaqbalkiisa caafimaadka ee ardayda iyo dadka waaweyn.
Haddii aad u baahan tahay mustaqbalkiisa ciyaareed aad si aad u hesho shahaadada associate ah ama shahaadada koowaad ee, waa inaad ka fekertaa in aad diyaar u ah inay maal badan oo waqti iyo lacag ee aad waxbarashada ku jira. Waxaa jira wax badan oo fursado aad si loo horumariyo shaqada caafimaadka. laga yaabaa in aad ku taameysid hesho shahaado gaaban-dheer ah hadda iyo gudbaysa heerka ku xiga ka dib in aad mustaqbalkiisa. Tusaale ahaan, waxaad bilaabi kartaa sida CNA iyo shaqeeyaan aad jidka kor si ay u noqdaan RN a.
Haddii aadan hubin waxa xirfadiisa danaha ugu aad, fikirto goobaha warshadaha caafimaadka in kori doono mustaqbalka ee. Tusaale ahaan, technology iyo daryeelka oday yihiin meelaha kordhaya. Wax kasta oo beerta aad doorato, waxaad u baahan tahay tababarka, shahaado, ama labadaba.
Tababarka iyo xirfadaha
Haddii aad ogtahay waxa xirfadiisa daryeelka caafimaadka aad xiisaynayso, eegaan shuruudaha shaqada waayo, career.Depending in on shuruudaha, waxaad ka xaadiri kartaa Kulliyadaha bulshada ama dugsiga farsamada, tag jaamacad afar sanno ah, ama waxbarasho online.
Haddii aadan helin aad shahaadada dugsiga sare, waa in uu noqon talaabada ugu horeysa ee aad. Our GED free® barnaamijka diyaarinta kaa caawin doona si aad u hesho shahaadada dugsiga sare.
kulliyadaha bulshada iyo dugsiyada farsamada bixiyaan darajo laba sano iyo tababarka cayn kasta oo ah xirfadaha daryeelka caafimaadka. Waad awoodaa ka heli kulliyadda beesha kuu dhow.
Job Corps waa barnaamij dawladda ah oo bixiya waxbarasho lacag la'aan ah iyo tababar xirfadeed si ay gabdhaha iyo wiilasha dhallinyarada da'doodu u 16 in 24. tababarka Job Corps waxaa ka mid ah shaqooyinka caafimaadka sida: CNA, kaaliyaha caafimaadka ilkaha, daawo-, ku xigeenka maamulka caafimaadka, duwaha qaybta caafimaadka, iyo shati kalkaalisada / xirfadeed.
Waxaad ka akhrisan kartaa sida loo codsado college.
Haddii aad haysatid shahaado caafimaad ama degree, Upwardly Global caawisaa soo galootiga shaqo-idman, qaxootiga, Entry Level, iyo dadka haysta Immigrant Visa Gaarka ah (SIVs) guuleysatey shaqooyinka xirfadeed ee dalka Mareykanka.
Halkan dhawr siyaabood oo si aad u bilowdo shaqo raadintaada:
Isticmaal xarunta shaqada: xarumaha shaqada dawladda ee magaalo kasta waa lacag la'aan. Waxay bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawiyaan resume iyo codsiyada shaqada. Waxay kugu xidhi karaan tababar shaqo caafimaadka iyo waxbarashada. Raadi xarunta shaqada ee kuugu dhow.
fiiri online: HealthCareers waa mid ka mid ah dhowr ah websites in lagu qoraa shaqooyinka daryeelka caafimaadka online.
Eeg bogga internetka ee ururrada daryeelka caafimaadka: fiiri online at internetka ee meelaha bulshadaada in aad jeclaan lahayd in ay ka shaqeeyaan.
Sida loo sameeyo resume weyn
Sida loo diyaariyo wareysiga